Cancer Treatments – ကင်ဆာကုသခြင်း | Singapore Personalized Patient Care
Cancer Treatments – ကင်ဆာကုသခြင်း
English Chemotherapy involves the use of drugs that are toxic to cancer cells. This treatment method remainsamainstay of anti-cancer therapy. Depending on the type of cancer under treatment and choice of chemotherapy drugs, therapy may either be by injection or by mouth. While the use of chemotherapy is often associated with side effects, when placed in good hands, used in appropriate combinations and with appropriate medications to counter the negative effects, such side effects can often be minimised. Chemotherapy can be compatible withagood quality of life.
Targeted therapy involves the use of anti-cancer medications that are able to specifically attack cancer cells while minimising damage to normal cells of the body thereby lessening the side effects. This ability to distinguish between cancer cells and normal cells makes targeted therapy an increasingly attractive treatment option.
Antibodies are the natural targeted defence that our bodies produce. These bind to bacteria and viruses that attack our bodies and direct our other body defence systems to attack these ‘foreign’ elements while minimising harm to the normal cells. Advances in medicine have resulted in the design of artificially produced antibodies with the ability to specifically attack cancer cells. Several such antibodies are successfully in use in cancer treatment.
The growth of certain cancers, such as breast and prostate cancers, are driven by the hormones of our bodies. Hormonal treatment involves the use of medications or other methods to counter the stimulatory effects of hormones on cancer growth and survival.
Our immune system has the natural ability to detect and destroy abnormal cells including cancer cells. Immunotherapy involves the use of drugs that work in tandem with our immune system to attack cancer cells.
Cancers are best treated at an early stage when the likelihood ofacomplete cure is at its highest. Laboratory, X-ray and other investigations conducted with the aim of early cancer diagnosis are best guided byacancer physician afteradetailed interview and discussion. This facilitates best results from an approach tailored according to individual risk profiles.
Cancer Genetic and Risk Assessment
Certain cancers are hereditary in nature. A history of multiple members of the family diagnosed with cancer should prompt an early assessment of the likelihood of an inherited tendency towards cancer development and genetic testing if required.
Certain personal, hereditary or lifestyle conditions may increase the risk of developing cancer. Where necessary treatment can be provided to reduce the associated risk. After all, prevention is better than cure.
Cancer may bealeading cause of death worldwide yet major advances in chemotherapy have been achieved over the years, increasing the likelihood of cure as well as the average survival of cancer patients.
Conventional chemotherapy, while effective, also causes severe side effects and damage to the body. The problem arises from the generalised action of most chemotherapy leading to damage of not only cancer cells, but also of normal cells of the body. More effective combinations of chemotherapy therefore often bring with them more severe side effects. In the quest for better treatment, the search goes on for increasingly specific therapy that effectively targets the cancer cells while minimizing damage to normal cells of the body.
Over the last few years, targeted therapy has becomeareality in many ways!
In early breast cancer treatment, the use of the medication Herceptin® in patients with tumours displaying the medication target has led toadramatic reduction in the ability of the cancer to rebound.
The use of another medication Avastic® has significantly improved the survival of patients afflicated with advanced lung or colon cancer.
Apart from the preceding2medications know as antibodies,aclass of special medication has been developed to block specific targets on cancer cells that are responsible for cancer growth. Members of this class of drugs include Iressa® and Tarceva® and these have entered clinical use with applications in the treatment of advanced cancer of the lung and pancreas. Their favorable side effect profile and ease of taking by mouth are especially attractive, These medications are nowanovel treatment option for patients who are either unable to receive chemotherapy or who suffer from tumours that are not responsive to chemotherapy.
These improvements continue to give us better and better outcomes in our relentless pursuit of the ideal cancer treatment.
မြန်မာ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းသည် ကင်ဆာဆဲလ်များကို သေစေသော ဆေးများ သုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆေးသွင်းကုထုံးသည် ကင်ဆာရောဂါကုသခြင်းတွင် အဓိက ကုသနည်းတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကင်ဆာ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး သုံးရမည့်ဆေးများနှင့် သုံးပုံသုံးနည်း (ဆေးထိုးခြင်း/ ဆေးသောက်ခြင်း) ကွာခြားပါသည်။ ကင်ဆာတိုက်ဖျက်ဆေးများ သုံးခြင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များစွာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွမ်းကျင်သူများက၊ သင့်တော်သော တွဲဖက်ဆေးများကို သင့်တော်သော အချိုးအစားဖြင့် စံနစ်တကျ ကုသပေးပါက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ခံစားရမှုများကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ယင်းကုသနည်းဖြင့် ကောင်းမွန်သော လူနေမှု အဆင့်အတန်းကို ပြန်လည် ရရှိနိုင်စေပါသည်။
Targeted Therapy – တိကျသောကုထုံး
တိကျသောကုထုံးသည် ကောင်းနေသော ဆဲလ်များကို ထိခိုက်မှု သိပ်မဖြစ်စေပဲ ကိုယ်တွင်းရှိ ကင်ဆာဆဲလ်များကိုသာ တိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးစေနိုင်သော ဆေးများကို အသုံးပြုကုသပေးခြင်းဖြင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို လျော့ကျစေသော ကုထုံးဖြစ်ပါသည်။
Biological Therapy – ဇီဝဆိုင်ရာကုထုံး
ပဋိဇီဝပစည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာက ထုတ်လုပ်ပေးသော သဘာဝခုခံအားဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခနာကို တိုက်ခိုက်မည့် ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကိုဝင်ပူးကာ ကိုယ်တွင်းခုခံအားစံနစ်ကို ရန်သူများအား တိုက်ခိုက်ရန်ညွှန်ကြားပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မိမိကိုယ်ခန္ဓာရှိဆဲလ်များအား ထိခိုက်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးပါသည်။ ဆေးပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများအရ စမ်းသပ်တီထွင်ထားသော ပဋိဇီဝပစည်များသည် ထိုသို့သော လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုပဋိဇီဝပစည်းများဖြင့် လည်း ကင်ဆာရောဂါကို ထိရောက်စွာကုသပေးနိုင်ပါသည်။
Hormonal Therapy – ဟော်မုန်းကုထုံး
အချို့သောကင်ဆာများ (ဥပမာ-ရင်သားကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ) ၏ ဖြစ်ပွားမှုမှာ မိမိကိုယ်ခန္ဓာတွင်းရှိ ဟောမုန်းများ၏ လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဟော်မုန်းကုထုံးတွင် ကင်ဆာပွားမှုနှင့်ကင်ဆာဆဲလ်များ ရှင်သန်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးနေသည့် ဟောမုန်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကို တန်ပြန်သည့် ဆေးများပေးခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။
Immunotherapy – ကိုယ်ခံအားကုထုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ခံအားစံနစ်တွင် ကင်ဆာဆဲလ်များအပါအ၀င် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်များကို ခြေရာခံပြီး ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သော သဘာဝစွမ်းရည်ရှိပါသည်။ ကိုယ်ခံအားကုထုံးသည် ကိုယ်ခံအားစံနစ်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကင်ဆာဆဲလ်များကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Cancer screening – ကင်ဆာရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း
ကင်ဆာဟူသည် စောစောသိပြီး စောစောကုသနိုင်လေ လုံးဝပျောက်နိုင်ခြေများလေဖြစ်ပါသည်။ ကင်ဆာဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်က အသေးစိတ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးပြီး သင့်လျော်သော ဓါတ်ခွဲ၊ ဓါတ်မှန်နှင့် အခြားသော စစ်ဆေးသည့်နည်းများသုံးကာ ကင်ဆာရောဂါရှိမရှိ စောစီးစွာရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူနာတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို အသေးစိတ်သုံးသပ်ခြင်းပြီးမှ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးရလာဒ်ကို ရစေပါသည်။
Cancer genetic and risk assessment – ကင်ဆာဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေသုံးသပ်ခြင်း
အချို့သောကင်ဆာများမှာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါသည်။ မိသားစု ဆွေမျိုးများတွင် ကင်ဆာဖြစ်ပွားသူ များစွာရှိနေလျှင် မျိုးရိုးလိုက်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့် စောစီးစွာ စစ်ဆေးထားသင့်ပါသည်။
Cancer prevention – ကင်ဆာကိုကာကွယ်ခြင်း
အချို့သောလူများ၊ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းနှင့် လူနေမှုပုံစံ စသည့်အခြေအနေများသည် ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို ပိုများလာစေနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သလို ကုသမှုခံယူခြင်းဖြင့် ထိုသို့သော ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ကောင်းသည်မဟုတ်ပါလား။
ကင်ဆာသည် ကမာတစ်လွှားတွင် လူများသေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းများထဲမှ အဓိကအချက်တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေသေးသော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စိတ်ချရသော ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံးကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်တီထွင် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းကြောင့်လည်း ကင်ဆာလူနာများ၏ ပျမ်မျှသက်တမ်းကို ပိုရှည်လာစေရုံမက နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းပါ မြင့်မားလာစေပါသည်။
လက်ရှိဆေးလောကတွင် အသုံးများနေသောကုထုံးများသည် ထိရောက်သော်လည်း ဆိုးရွားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်မှုများရှိပါသည်။ ကင်ဆာဆေးအများစု၏ ယေဘုယျအာနိသင်သည် ကင်ဆာဆဲလ်များသာမက အခြားပုံမှန်ဆဲလ်များကိုပါ ထိခိုက်စေသောအခါ ထိုသို့သော ပြသနာများဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုမိုထိရောက်သော ကုသနည်းများကို ရှာဖွေသောအခါ ကင်ဆာဆဲလ်များကိုသာ အဓိက ပစ်မှတ်ထားသောကုထုံးများကို တွေ့ရှိပြီး ကောင်းနေသော ဆဲလ်များကို ထိခိုက်မှုသိသိသာသာလျော့ကျစေပါသည်။
ရောဂါရှိသောနေရာကိုသာ ဆေးရောက်စေသော တိကျသောကုထုံးကို လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ စောစီးစွာသိရသော ရင်သားကင်ဆာကုသခြင်းတွင် Herceptin® ဆေးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လိုအပ်သောနေရာကိုသာ ဆေးရောက်စေခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်များပြန်ပွားခြင်းကို ထိရောက်စွာ လျော့ကျစေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ နောက်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သော Avastic® ဆေးကိုသုံးကာ ရောဂါအဆင့်မြင့်နေပြီဖြစ်သော အူမကြီးနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါရှင်များ၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာရှည်လာစေပါသည်။ ကင်ဆာဆဲလ်များပေါ်ရှိ ကင်ဆာပွားမှုကိုဖြစ်စေသော အရာများကိုတိကျစွာ ဟန့်တားပေးသော ဆေးများကိုလည်း ဖော်ထုတ်အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့ထဲတွင် Iressa® နှင့် Tarceva® ကဲ့သို့သော ပန်ကရိယနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာအတွက် ဆေးများလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသိပ်မများခြင်းနှင့် ပါးစပ်မှသောက်နိုင်ခြင်း စသော အရည်အသွေးများကြောင့် ကင်ဆာဆေးကုထုံးကို မရနိုင်သူများနှင့် ကင်ဆာဆေးမတိုးသောကင်ဆာများအတွက် ထိုဆေးများကို ပိုမိုရွေးချယ်သုံးစွဲလာကြပါသည်။